Nhau - Zhou Jiangyong akaenda kuna Jiande maski mugadziri chaomeimask kuti aongorore
Pamasikati aNdira 27, Zhou Jiangyong, nhengo yeDare Rakamira reProvince Party Committee uye Munyori weHangzhou Municipal Party Committee, akaenda kuChaomei Daily Chemical Co, Ltd. (denda rekudzivirira chigadzirwa chigadzirwa) kuti aongorore. Akasimbisa kuti zvakakosha kuti uzadzikise mweya wekukosha mirairo yaGeneral Secretary Jinping, uye zvinoenderana nesarudzo nekutumirwa kweParty Party Committee, State Council, Provincial Party Committee neHurumende yeProvince. kuita basa rakanaka mukugadzira nekuwanisa denda rekudzivirira, kuona zvinodiwa mukudzivirira, kudzora uye kurapwa, uye kuona kuchengetedzeka kwevanhu. Muviri une hutano. Hangzhou Guta vatungamiriri Xu Ming naKe Jixin nevatungamiriri vedu veguta Tong Dingqian, Zhu Huan, naZheng Zhihua vakapinda.
Muwekishopu yeChaomei Mazuva ese Chemical Co, Ltd., mabhokisi emasikisi akarongedzwa uye akagadzirira kutumirwa kumatunhu ese enyika. Kuti tidzivirire nekudzora denda remabayo rinokonzerwa necoronavirus nyowani, vashandi veNorth Korea, United States neJapan Chemical vakasiya iyo Mutambo weChirimo kuti vasangane zvakare nemhuri dzavo uye vodzokera kufekitori kunoshanda nguva yekuwedzera kuti vagadzire masiki. .
Parutivi pemutsetse wekugadzira weNorth Korea neUnited States, Zhou Jiangyong akataura kutenda kwake kuvashandi veSexiaojia kune wese munhu, uye akakurudzira munhu wese kuti awedzere kugadzirwa, akurumidze kuendesa zvigadzirwa, uye aite mipiro yakawanda mukudzivirira uye kutonga kwenyika , ruwa, neguta. Mushure mekunzwisisa maitiro ekugadzira, kugona kwekugadzira uye kuwanda kwemasikisi zvakadzama, Zhou Jiangyong akataura kuti masiki ekudzivirira akakosha zvinhu zvekudzivirira nekudzivirira. Kubva pakatanga pneumonia inokonzerwa nekoronavirus nyowani, kudiwa kwemasikisi uye zvimwe zvekudzivirira zvawedzera. Makambani ekudzivirira uye ekudzora zvinhu anoziva mamiriro ezvinhu akajairika uye anofunga mamiriro ese ezvinhu, anosiya Zororo reMwaka weChirimo, anodyara zvizere muzvivimbiso zvekugadzira, uye anoita chinzvimbo chakakosha panguva dzinonetsa. Ndinovimba kuti iwe uchaita zvese zvinobvira kukurira matambudziko, uye pasi pechirevo chekuona mhando uye chengetedzo, iwe uchaedza nepose paunogona napo kuwedzera kugona kwekugadzira uye kuona zvinodiwa nezvipatara uye neruzhinji. Madhipatimendi ese akakodzera anofanirwa kuita nepavanogona napo kuona sevhisi, kuronga pamwe nekugadzirisa matambudziko anoshanda senge kugoverwa kwezvinhu zvakasvibirira, kugovera zvinhu, kutariswa kwehunhu hwechigadzirwa, uye kugovera zvine mutsindo mauto ekuzvipira kubva kumasangano, mabhizinesi nemasangano kubatsira mukugadzira, uye kubatsira mabhizinesi maererano yevashandi, zviwanikwa uye zviwanikwa zvemari. Yakazara yekugona kugona inovimbisa kugoverwa kwekudzivirira zvinhu zvakaita semasikisi uye inopa yakasimba rutsigiro rwehosha yekudzivirira uye kutonga.